जन्मदिन मनाउन तेह्रथुम पुगेका प्रधानमन्त्री र बास्काेटा सहित ४ जना बिरूद्ध अख्तियारमा उजुरी, सुनेर पनि नसुने झै गर्ने? – PathivaraOnline
Home > समाचार > जन्मदिन मनाउन तेह्रथुम पुगेका प्रधानमन्त्री र बास्काेटा सहित ४ जना बिरूद्ध अख्तियारमा उजुरी, सुनेर पनि नसुने झै गर्ने?
जन्मदिन मनाउन तेह्रथुम पुगेका प्रधानमन्त्री र बास्काेटा सहित ४ जना बिरूद्ध अख्तियारमा उजुरी, सुनेर पनि नसुने झै गर्ने?
काठमाडौं, ११ फागुन । प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला आफ्नो जन्मदिन मनाउन तेह्रथुम पुगेका छन् । उनले आफ्नो जन्मस्थानमै जन्मदिन मनाउने चाहना अनुरुप तेह्रथुम पुगेका हुन् । तर यता सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अखियमितता गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहित चार जनाविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको हो ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्वीस कम्पनीसँग तत्कालिन संचारमन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड ‘कमिशन’ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो अडियोको आधारमा नेपालगन्जका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुरका आनन्दराम पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा, तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल सेक्युरिटी प्रेसका सीईओ विकल पौडेलविरुद्ध आइतबार अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन्।
सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रकरणमा एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने पदवाट राजिनामा दिइसकेका छन् । उनले राजीनामा दिए पनि त्यतिकै उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै विरोध भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको पनि मिलेमतो देखिएको भन्दै राजिनामाको माग समेत गरेको छ । नेकपा भित्रै पनि बाँस्कोटाका सम्बन्धमा छानविन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार र उत्तरदायी पदमा रहेका व्यक्ति यस्तो भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफ्नो जानकारीमा आएपछि भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी नदिएकाले मिलेमतो भएको पुष्टि हुने तर्क गरिएको छ ।
सेक्युरेटी प्रेस खरिदमा स्वीजरल्याण्डका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग १६ महिनाअघि बास्कोटाले गरेको अडियो बुधबार राति बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले सो अडियो करिब डेढ महिना अघि नै सुनेको दावी गरिएको छ ।
बाेल्दा-बाेल्दैकि छोरीको उपचार गर्न नपाइ आफ्नै अगाडी बिते पछि, आमाले रुँदै छोरीलाई बोलाउन छोडिनन् (भिडियो)
जसपा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला!
बेवारिसे शवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि